आफुले बोल्दै नबोलेको कुरालाई हेडलाइन बनाएर आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने मिडियालाई अनमोलको यस्तो चेतावनी …. – पुरा पढ्नुहोस्……
आफुले बोल्दै नबोलेको कुरालाई हेडलाइन बनाएर आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने मिडियालाई अनमोलको यस्तो चेतावनी ….
नेपाली चलचित्रका सुपरस्टार नायक अनमोल केसीले आफ्नो चरित्र हत्या नगरिदिनुहुन भन्दै अनुरोध गरेका छन् । केहि अनलाइन मिडियामा अनमोलको बिषयमा भ्रामक समाचार प्रकाशन भएपछि उनले फेसबुकमा स्टाटस नै लेख्दै यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
केहि अनलाइनमा ‘अनमोलले गाउँले भनेका भिकारी हुन्’ भनेको भन्दै भ्रामक समाचार प्रकाशन भएपछि अनमोलले स्टाटस नै लेखेका हुन् । आफ्नो बारेमा आएका समाचार र चर्चामा खासै नबोल्ने अनमोलले आफ्ना फ्यान र दर्शकमा भ्रम नपरोस् भनेर स्पष्टिकरण दिएको अनलाइनखबरसँग बताएका छन् ।
अनमोलले भने-‘म आफै पनि अचम्मित छु । म संसारका हरेक मानिसले सुख पाउन् भनेर काम गर्छु । तर, बोल्दै नबोलेका कुरालाई लिएर खबर आउँदा दुख लाग्ने रहेछ ।’
Prevआयो बिश्वास नलाग्ने भिडियो ! हेर्नुहोस् पागल बनाउने भिडियो
Nextबिमान दुर्घटना २ सय सैनिक पलभरमै यसरी भए खरानि ….
पहिलोपटक निकै रोमान्टिक बने ऋषि धमला, गुलाबको फुल दिदै गीत गाए एलिजाको लागी(भिडियो),
‘मिस्टर झोले’ को कमाई २ करोड २२ लाख पुग्यो, कहाँ-काँहाबाट कति कमायो त?
‘टिकटक’मा हिट सम्झना पहिलो पटक मिडिया ! : भन्छिन्,- “पल शाहसंग खेल्ने तयारीमा छु” हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)